Soosaarayaasha Tags Rfid - Shirkadaha Shiinaha Rfid Tags & Shirkado
Maskaxdu waxay leedahay in kabadan 20 ABS oo kaladuwan oo loogu talagalay xulashada macaamiisha, cabirka / qaabku waa kaladuwan yahay iyadoo loo eegayo baahiyaha macaamiisha ee kaladuwan. Kusoo dhawow naqshada OEM.
Qaar ka mid ah codsiyada RFID waxay u baahan yihiin inay ka helaan unug gaar ah waxyaabaha kooxeed. UHF LED Inlay waa naqshad ku habboon in la gaaro xalka sheyga raadinta, oo ku habboon noocyada kala duwan ee sumadaha RFID beddelashada. Qalabka caalamiga ah ee RFID, wuxuu akhriyaa oo uu helaa INLAY / tag oo leh TID gaar ah, ka dibna meel fog ka kiciya LED-ka, xaqiijiya weydiinta degdegga ah iyo hel waxyaabaha walxaha bartilmaameedka ah! Caawinta helitaanka meesha shayga, si weyn u wanaajiya waxtarka baaritaanka iyo heerka maaraynta! Isku darka ugu fiican ee UHF akhriska masaafada dheer & Iftiiminta LED-ka ayaa tirtiraysa dhibcaha xanuunka warshadaha waxayna ka dhigeysaa codsiga RFID mid qiimo leh!
GuulwadayaalMini UHF Taaga birta ah
Conqueror mini UHF taxan-biraha ayaa u muuqday alaabada birta sida qalabka, qalabka iwm.
Conqueror taxane taxane ah waa darajo fasal warshad UHF TAG, qoreysa heerkulka sare u adkaysiga, caabbinta daxalka, heerka IP67 ee biyuhu, caabbinta birta iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah
Macno malahan ku lifaaqan dusha sare ee birta ama ku beerin gudaha, waa la aqrin karaa, koox la aqrin karaa, xitaa xirashada akhris Codsiga RFID waxaa loo isticmaali karaa si ballaaran loona horumariyey si aan xad lahayn!
RFID tags Jewelry
Maskaxdu waxay siisaa waxyaabo badan oo tagf gaar ah sida RFID tag, dharka tag RFID, tag RFID muraayadaha indhaha, Taayirada RFID taaga, tag RFID tag iwm
RFID tag dharka
Taarigga hore ee RFID
Xarkaha gacanta lagu xiro ee RFID
si ballaaran loogu isticmaalay baakadda garoonka, lasocodka baakadka, aqoonsiga bukaanka, aqoonsiga, maareynta xabsiga, maaraynta daryeelka hooyada iyo dhalaanka.
Xarkaha siligga ee warqadda RFID
Isbitaalada Si Weyn Loo Adeegsaday, Aagagga Xakamaynta Soo-Gaadhida, Riwaayadaha, Garoomada diyaaradaha iwm.
Xarkaha siligga RFID Silicone
si ballaaran loogu adeegsado Xarumaha, Baashaalada Madadaalada, Basaska, Aagagga Xakamaynta Helitaanka, Riwaayadaha iwm.
MT001 maaraynta hantida rfid tag
RFID biraha anti tag sidoo kale waa nooc ka mid ah elektarooniga tag rfid, oo guud ahaan loo isticmaalo gudbinta iyo helitaanka xogta. Dusha sare ayaa isticmaali doona waxyaabo nuugi kara hirarka elektromagnetic. Qalabkani wuxuu kaloo leeyahay faa'iidooyin qaar: sida miisaanka oo khafiifa, wuxuu u adkeysan karaa heerkulka sare, caddeynta qoyan, wuxuu iska caabin karaa daxalka.